Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » UNWTO machibidoro ndị nta akụkọ Critical na ahịa njem njem ụwa
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • LGBTQ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Tourism • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akwụkwọ akụkọ USA • WTN
Ụlọ ọrụ mgbasa ozi nweere onwe ya bụ ihe ndabere maka obodo onye kwuo uche ya. Ọ na-achọ ma na-ekesa akụkọ, ozi, echiche, nkọwa na echiche, ọ na-ejidekwa ndị nọ n'ọchịchị na-aza ajụjụ. Ndị nta akụkọ na-enye ikpo okwu maka ọtụtụ olu ka a na-anụ. N'ọkwa mba, mpaghara na mpaghara, ọ bụ onye na-ahụ maka ọha, onye na-eme ihe, na onye nlekọta yana onye nkuzi, onye na-eme ihe nkiri na onye na-agụ akụkọ nke oge a. O doro anya na ndị ọchịchị aka ike na-atụ ndị nche ọha dị otú ahụ egwu, otú ahụ ka ọ dịkwa odeakwụkwọ ukwu UNWTO Zurab Pololikashvili.
UNWTO bụ ụlọ ọrụ jikọrọ aka na United Nations n'okpuru iwu mba ụwa.
Ugbu a, UNWTO nwere odeakwụkwọ ukwu na-akwadoghị iwu na-achị nzukọ a dị ka onye ọchịchị aka ike. Dị ka nkọwa iwu sitere n'aka onye ọka iwu nke tinyere aka n'ịmepụta atumatu UNWTO, SG Zurab Pololikashvilihe ka etinyere naanị site n'iji aghụghọ. Agaghị anabata ntuli aka mbụ na 2018.
Onye odeakwụkwọ ukwu jisiri ike zere ajụjụ ndị nta akụkọ niile dị oke egwu kemgbe ọ malitere isi na Jenụwarị 1, 2018. Taa bụ ihe atụ na otu UNWTO ga-esi mechie onye ọ bụla na-ekwenyeghị na odeakwụkwọ ukwu.
Mgbakọ ndị ozi mbụ na Ahịa Njem Ụwa kemgbe ọrịa a, mere taa na London na WTM World Stage na Excel Exhibition Center.
Dị ka mgbe niile, ndị ozi na-ezukọ iji kparịta ihe ndị metụtara World Tourism Organisation na steeti ụlọ ọrụ ahụ. Dị ka ọ dị kemgbe e hiwere UNWTO dị ka ụlọ ọrụ UN, ndị nta akụkọ so na ndị na-ege ntị, mana ha enweghị ike ịjụ ajụjụ. Mgbe e nwesịrị mkparịta ụka ndị ozi, ọ bụ omenala inwe nnọkọ ndị nta akụkọ.
Ihe a niile gbanwere na Jenụwarị 1, 2018, mgbe Zurab Pololikashvili ghọrọ onye na-ahụ maka njem nlegharị anya ụwa.
Nzukọ ndị nta akụkọ na nnukwu ihe ngosi azụmahịa ma ọ bụ tebụl ndị ozi emeghịzi eme. Zurab na-egosi naanị maka foto ops wee pụọ.
N'oge nsogbu COVID-19 niile, odeakwụkwọ ukwu UNWTO zeere akwụkwọ akụkọ niile dị egwu. Taa na London, odeakwụkwọ ukwu gara n'ihu.
Iji zere nzaghachi ma ọ bụ ajụjụ ọ bụla dị oke egwu, ọ kpachaara anya depụta ndị nta akụkọ na-ede akwụkwọ maka mbipụta dịka nke a, eTurboNews.
Ihe kpatara ya: eTurboNews ọ kparịrị odeakwụkwọ ukwu.
Izere echiche na-ezighị ezi dị mkpa ọbụna taa, ebe ọ bụ na Zurab Pololikashvili dị maka okwu nke abụọ, na nhoputa ndi ozo ga-eme ka nhoputa ndi ochichi na Madrid kwadoro ya.
N'ịbụ onye meriri nkwenye okwu nke abụọ site na Executive Council na January n'ihi nnukwu aghụghọ, na-enwe ike ịgbanwe ebe maka Mgbakọ General na Madrid, ọ na-enye ohere doro anya maka Zurab ka a kwadoro ya maka okwu nke abụọ dị ka UNWTO Sectorary General ngwụcha ọnwa a. Ajụjụ ndị dị oké mkpa adịghị ya mma.
Nzukọ ndị ozi nke taa na WTM London bụ otu n'ime mmemme ndị ahụ ọ gara na nke mbụ kemgbe COVID. Ọ dị mkpa ka ọ dị mma izu ole na ole tupu nkwupụta nkwenye ya, mana ọ nweghị ike ihu mgbasa ozi.
The Hon. Najib Balala, odeakwụkwọ nke njem nlegharị anya maka Kenya, UNWTO jụrụ n'izu gara aga mgbe ọ kpọchara Mgbakọ General ka e mee na Kenya kama Madrid.
Minista Balala nọ na London taa ka ọ gaa nzukọ ndị minista. A gwara ya na o nweghịzi oche fọdụrụ maka ndị ozi. Ọ hapụrụ ihe omume nkeji nkeji ka ọ banyere, na-agwa eTurboNews onye nkwusa, Juergen Steinmetz, onye na-eche n'ọnụ ụzọ ọpụpụ.
Ndị nta akụkọ niile na-aga WTM nọ ọdụ maka mmemme ahụ, ewezuga eTurboNews Juergen Steinmetz nọchitere anya ya. E mere ya onye na-abụghị grata, ekwetaghị ka ọ banye n'elu ugwu.
eTurboNews bụ onye ọrụ mgbasa ozi gọọmentị maka World Travel Market, mana nke a emeghị mgbanwe ọ bụla. eTurboNews onye ọrụ UN yiri ya egwu mgbe ọ na-ese vidiyo nke ihe omume a.
UNWTO yiri ka ọ na-aga nke ọma n'izere nkatọ site na isi mgbasa ozi.
Dịka ọmụmaatụ CNN bụ onye ọrụ mgbasa ozi gọọmentị na-enweta ọtụtụ nde dollar mgbasa ozi site na ebe njem nlegharị anya. Anita Mendiratta, onye ndụmọdụ kacha elu nke odeakwụkwọ ukwu, hiwere otu CNN Task Group na UNWTO. Ebumnuche CNN Task Group bụ ire mgbasa ozi. E hiwere otu a ọtụtụ afọ gara aga, na mbụ ya eTurboNews dị ka onye mmekọ. o wee bụrụ eTurboNews nke hụrụ esemokwu nke mmasị wee hapụ otu ahụ na CNN, UNWTO, ICAO, na IATA fọdụrụ.
Marcelo Risi, onye na-ahụ maka nkwukọrịta maka UNWTO, jụrụ ịgwa Steinmetz okwu. A hụrụ ya ka ọ na-agbapụ n'ọnọdụ ahụ, na-ekwu, sị: "Juergen, eji m ọrụ n'aka."
Nke a abụghị naanị ọnọdụ na-emenye ihere, mana ọ bụ mmebi iwu doro anya nke nnwere onwe mgbasa ozi na ikpe doro anya nke ịkpa ókè.
Ọ bụghị naanị Steinmetz nọchitere anya ya eTurboNews, ma ọ bụkwa onyeisi oche nke Network Njem Nleta Ụwa, otu mba njem nlegharị anya. Steinmetz bụkwa onye so na bọọdụ ndị isi na bọọdụ njem nlegharị anya Africa.
Ọ gbalịrị ịgakwuru onye na-ahazi nzukọ minista, World Travel and Tourism Council (WTTC), mana ndị isi n'ọnụ ụzọ jụrụ ime ka onye ọrụ WTTC gwa ya okwu, na-ekwu na ha amaghị ihe WTTC pụtara. maka.
Na mkparịta ụka dị mkpirikpi na WTTC mgbe ihe omume ahụ gasịrị, a gwaghị ndị isi nke nzukọ ahụ ihe merenụ.
Lelee vidiyo iPhone na-egosi ọnọdụ na-apụta: